Waxaan Ka Tagayaa Shaqo Weyn Waxaanan Ku Sii Jeedo Baraha Bulshada | Martech Zone
Waxaan ka tegayaa Shaqo Weyn waxaanan ku wajahanyahay baraha bulshada
Sabtida, Oktoobar 4, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sannadkii ugu dambeeyay ee aan soo qaatay Wadada wuxuu ahaa mid si aan caadi aheyn u socdaalaya. Shirkaddu waxay ku jirtaa kobcin ballaaran oo si weyn u guuleysatay!
Waxaan ku guuleysanay Abaalmarinta Techpoint Mira.
Waxaan dhameystirnay horumarka 4 POS isku dhafka - Micros, POSitouch, Comtrex iyo Aloha.
Waxaan dib u cusbooneysiinay interface-ka isticmaalaha si aan ugu badino bedelida macaamiisheena. Waxaan kudarnay shaqo ka fariisasho iyo astaamaha amniga arjiga.
Xitaa waxaan ku dhex tuurnay goobta Goobta Makhaayada silsiladaheena unugyada badan.
Jimcaha waxay ahayd maalintii iigu dambeysay Wadada. Way adkayd inaan ka tago shirkad aan ku shubay qalbigayga iyo naftayda oo leh taageero maaliyadeed kuwa ugu badan guul Internet shirkadaha in Indianapolis
Markaad Ka Tageyso Patronpath
Shaki iigama jiro in aan uga tagay shirkadda qaab wanaagsan. Waxa kaliya ee aan ka walwalsanahay ayaa ah in maalgashadayaashu ay okay ku dhaqaaqeen iyo in kale. Sababta muhiimka ah ee aan u aaday Patronpath waxay ahayd inaan barto kooxdooda maalgashiga - oo ka kooban qaar ka mid ah ganacsatada internetka ee ugu wanaagsan gobolka. Wixii iigu dambeeyay ee aan sameeyo ayaa ahaa inaan iyaga ka tago kadib guul badan. Waan sii wadi doonaa la-talinta iyo caawinta Patronpath markasta oo ay ii baahdaan, si loo hubiyo in bixitaankaygu uusan saameyn ku yeelan guushooda.
Kobaca iyo natiijooyinka xaqiiqdii waxay ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan Patronpath. Waxaan fursad u helay inaan la shaqeeyo dad aan caadi aheyn. Waxaan ka shaqeynay xoogaa mucjisooyin ah sanadkii la soo dhaafay iyadoo aan haysan kheyraad yar. Waan ku faraxsanahay wixii aan gaarnay.
La Shaqeynta Dadka Darajada Adduunka
6-dii bilood ee la soo dhaafay ama wixii la mid ah, waxaan ku raaxeystay la shaqeynta Marty Bird - qof aan ku aqaanay maalmahaygii hore Xaqiiqda laakiin waligood fursad uma helin inay si toos ah ula shaqeeyaan. Marty waa suuq-yaqaan aan caadi aheyn oo leh karti-u-dhiska barnaamijyada suuqgeynta heer caalami ah laga bilaabo xoq.
Marty wuxuu ku soo galay Patronpath si uu u qaato barnaamij cusub oo emayl qaran ah oo aan hadda u saxeexnay shirkad balaayiin doolar ku kacda. 2 maalmood gudahood, wuxuu la wareegay mashruuca. Dhowr toddobaad gudahood, wuxuu dhistay barnaamij iyo habraac mashruuca. Haatan barnaamijku wuu sii korayaa oo wuu ku magooli doonaa hoggaankiisa. Muxuu ahaa nin weyn! Xaqiiqda yar ee la og yahay, Marty sidoo kale waa makaanik sayid leh a xiisaha Audi TT.
Kooxda inteeda kale wey fiicnaayeen sidoo kale. Mark Gallo iyo Chad Hankinson waxay ahaayeen kuwo cabsi badan inay si xirfad leh iyo shaqsiyan labadaba ula shaqeeyaan. Labaduba waa Masiixiyiin waa weyn oo iga caawiyay inay ila taliyaan caqabadaha qaarkood. Aniguba deyn baan ku ahay. Waxay sidoo kale leeyihiin koox Maareynta Xisaabaadka ah oo halgamayaal adag oo u heellan inay ka caawiyaan macaamiishooda guuleysta. Waxaan la shaqeeyay Tammy Heath sanadka intiisa badan oo iyadu waxay ahayd mid layaableh, oo saacidaysa daraasiin macaamiil ah saacad kasta oo wali awood u leh inay soo saarto
Dhinaca adag ee sanadkan ayaa ahaa dalabaadka shaqada iyo sida ay dareenkayga oo dhan u soo jiiday. Boggan waxaa ku dhacay sida dareenka aan awooday inaan u siiyo qaar ka mid ah PET mashaariic. Wicitaan ahaan markii la wacay ayaa iga fogeysay dhacdooyinka isku xirka gobolka, sidoo kale. Waqtiyadii dhif iyo naadir ahayd ee aan soo muuqday, dadku waxay ahaayeen kuwo naxsan!
Darawalka ka imanaya dhanka woqooyi ee Indy wuxuu ahaa wax aan jeclahay markii hore, laakiin maadaama qiimaha gaaska cirka isku shareeray oo gabadhaydu ay gurigayga aad iigu baahan tahay, dhowr saacadood maalintii wadada ayaa bilawday inay si dhab ah u dhaawacdo. Waan ku mahadinayaa wiilkeyga - adoo xamaalaya rar buuxa at IUPUI iyo sidoo kale umeerin khaas ah iyo Xarunta Caawinta Xisaabta, weli wuxuu helay waqti uu Katie u geeyo ugana soo qaado dhacdooyinka uguna quudiyaan. Waxaan u mahadcelinayaa carruurtayda cajiibka ah!
Ku wajahan Compendium Blogware
Marka… markii Chris Baggott uu ka soo wacay Compendium Blogware oo aan idhi waxaa jiri kara fursad aan kula shaqeeyo, aad baan u farxay! Isukeenis bilaabay aniga iyo Chris waxaan la shaqeyneynaa dhamaadka usbuuc dhamaadka 2006.
Waxaan la joogay ExactTarget oo Ali Sales ayaa fuulay markabka. Hogaaminta Ali ee xiisaha Chris waxay cirka isku shareertay shirkadda oo noqotay mid cajiib ah Madal Blogging Corporate. Waxaan xiriir dhow la lahaa shirkadda sanadkii la soo dhaafay waxaanan ku wacdiyey barxada. Waxaan hadda keenay shirkad sharciyeed oo la yiraahdo Bose McKinney bil ka hor waxayna horeyba u sheegeen inay soo tebinayaan hoggaamiyeyaasha Raadinta ee horayba u ahaa!
Isniinta, waxaan qabanayaa waajibaadka sida Madaxweyne kuxigeenka Blogging Evangelism at Compendium. Waxaan la socodsiin doonaa Ali waxaanan ka caawin doonaa dhamaan kooxahayada iyo macaamiishayada waxbarida, wacdinta, otomaatiga, isdhexgalka, iwm. dadaalka suuq geynta. Taasi waa meel adag oo la iska diido shaqadayda dhawrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa Goobaha Indy markale, marka waxaan hubaa inaan la kulmi doono saaxiibo badan oo duug ah!
Si aad uga fikirto inay wax walba ku bilaabmeen Pat Coyle iyo aniga aqrinaya Wadahadal qaawan dhawr sano ka hor waa quruxsan cajiib ah.
Intaas, waxaan ku leeyahay mahadsanid Robert Scoble iyo Sheel Israa'iil qoritaanka buug igu dhiirrigeliyay inaan bilaabo boggeyga gaarka ah oo beddelay jihada aan doonayay inaan u maro adduunka suuq-geynta! In aan qabanayo jago baraha bulshada inta lagu jiro mid kamid ah hoos udhaca dhaqaale ee uguxumaa ee taariikhda wadanka ayaa kahadlaya awooda warbaahintan, miyaanay ahayn?
Falanqaynta Suuqgeynta 101: I Tus Lacagta!
1,500 Qoraal! U Gudbinta Xukunka Warbaahinta Bulshada!
Oktoobar 4, 2008 at 5:10 PM
Hambalyo Doug! U fiirso maqalka dhammaan wixii ku saabsan shaqada cusub!
Kufiican balliga oo dhan,
Oktoobar 4, 2008 at 5:13 PM
Taasi waa war aad u wanaagsan Mudane VP, mudane, sarreeyahaaga!
Adiga iyo qoyskaaguba
Miyay ku dhici lahayd nin fiican!
Oktoobar 4, 2008 at 5:31 PM
War weyn, Doug! Waxay u fiicneyd akhrinta faahfaahinta iyo taariikhda ka dambeysa go’aankaaga.
Oktoobar 4, 2008 at 5:33 PM
Hambalyo Doug. Runtii warar qabow iyo mahadsanid wadaagida sheekadaada.
Oktoobar 4, 2008 at 5:49 PM
Ku soo dhowow warbaahinta bulshada! Ninyahow, aniguba waan jeclahay !! Waan cunaa, neefsanayaa oo seexanayaa alaabtaan !! Midka kuugu fiican adiga !!
Oktoobar 4, 2008 at 6:08 PM
Naga sii dheji guushaada! Waan ku faraxsanahay inaan arko waxa aad u keeni doonto shirkad noocan oo kale ah oo horeyba u ahayd mid la yaab leh!
Oktoobar 4, 2008 at 6:23 PM
Doug - waaw! waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan. Kartidaada, qiiradaada iyo xamaasadaadu si fiican ayey kuugu adeegi doontaa Compendium - hambalyo. Wax ku biirintaada muhiimka ah ee Patronpath waxay abuurtay aasaas aan sii wadi doonno inaan ku sii dhisno. Waan u xiisi doonaa joogitaankaaga xafiiska, dabeecadaada hoose, dhadhankaaga waalan ee muusikada (!) Iyo qosol farxad leh. Kuu raacaya adiga Twitter kaliya ma beddeli doonto wada hadalada saacadda weyn ee qadada ee aan soo marnay! Iska ilaali Doug.
Oktoobar 5, 2008 at 1:07 AM
CAJIIB !! Taasi waa wax laga naxo! Waan ogahay inaad sifiican u qaban doontid – waa dareenkaaga!
Oktoobar 5, 2008 at 7:26 AM
Heshiis wanaagsan Doug!
Waxaan xasuustaa inaad ii sheegtay ka qayb qaadashadaada Compendium waxaanan u maleeyay inay taasi kuu noqonayso barxad weyn!
Aad ufiican in la maqlo taasi oo ugu dambayn rumoobaysa!
Oktoobar 5, 2008 at 9:58 AM
Nasiib wacan Doug!
Waxay u egtahay sida kuugu habboon adiga. Waan ku riyaaqay shaqada aad qabato waqtiga firaaqada ah ee ku jira boggan. Waxay noqon doontaa madadaalo inaad aragto sida ay tahay markii ay leedahay dareenkaaga oo dhan.
Oktoobar 5, 2008 at 6:13 PM
Waxaad wax weyn ku qaban doontaa Compendium!
Oktoobar 6, 2008 at 12:28 AM
Hambalyo adiga kuugu fiican, Doug. Waan hubaa inaad wax weyn ku qaban doontid gig-ga cusub waana jeclahay cinwaanka cusub! (Waxay soo qabanaysaa wixii aad horay u qaban jirtay.)
Oktoobar 6, 2008 at 5:08 AM
Waa hagaagtay, Doug!
Oktoobar 7, 2008 at 2:59 PM
Hambalyo Doug, ayaa maanta arkay warka! Nasiibka ugufiican ee doorkaaga cusub, dhawaaqyada sidaada oo kale ah iyo Compendium ayaa sifiican ugufiican.
May 30, 2011 at 8: 15 AM
CAJIIB !! Waxaad ku fiicnaan doontaa Compendium!